विद्युत प्राधिकरणको हचुवा कार्यक्रम, रित्तो विभागलाई ऊर्जा दक्षताको भारी - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
विद्युत प्राधिकरणको हचुवा कार्यक्रम, रित्तो विभागलाई ऊर्जा दक्षताको भारी
बैशाख ०३, २०७५ 1800 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछिल्लो समय संस्थागत सुधारका दर्जनौं कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसको कार्यान्वयनको परिणाम देखिएकै छ । चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता असुली तथा विद्युत वितरणमा देखिएका प्राविधिक त्रुटी कम हुँदै गएका छन् ।
प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक समस्या समाधान गर्दै विद्युत माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गरेर प्राधिकरण तथा यसको नेतृत्वले प्रशस्त प्रशंसा पनि बटुलेको छ । उपलब्ध विद्युत सन्तुलित वितरण गर्दै बढी उपभोक्तामा पुर्याउनु चुनौती पनि हो । यो चुनौती व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण अहिलेसम्म सफल देखिन्छ ।
बढी विद्युत खपत गर्ने विस्थापित गर्दै कम खपत गर्ने उपकरण उपयोगमा पनि जोड दिइएको छ । यसले ऊर्जा सुरक्षा र दक्षतामा सुधार ल्याएको पनि छ । यो काममा प्राधिकरण तथा यसको नेतृत्वले चर्चा बटुलेकै छ ।
यद्यपि, प्राधिकरणभित्र भएका र हुने गरेका संस्थागत सुधारका काममा व्यक्ति लहड तथा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको स्वार्थ हाबी हुने गरेको छ । केही विभाग वा निर्देशनालयमा कसैसँग चित्त नबुझे वा आफूअनुकूल काम नभए उसको सरुवा गरेर अमुक विभाग गठन गरी थन्क्याउने प्रवृत्ति बढ्न थालेको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् ।
प्राधिकरणमा स्थापना गरिएको ‘ऊर्जा दक्षता विभाग’ लाई त्यही बेकामे विभागको रूपमा अथ्र्याइएको छ । विभागको निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका छन्, रामजी भण्डारीले । बजेट, योजना तथा कार्यक्रमबिनाको विभागमा हाकिम तथा यहाँका कर्मचारीको दिनचर्या चिया खाने, पहुँनालाई स्वागत गर्ने र गफ गर्नमै बित्ने गरेको छ ।
कुन कर्मचारी कुन विभागमा काम गर्छ भन्ने ठूलो कुरा होइन । काम गरेर देखाउने व्यक्तिका लागि विभाग, शाखा वा महाशाखा ठूलो सानो नहुने भण्डारीको तर्क छ । ‘नेतृत्व वा कोही कसैसँग प्रतिशोध राख्नु जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘मैले आफ्नो पद र जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने हो । र, म गर्न सक्छु भनेर देखाउने हो ।’
विभाग भर्खरै गठन भएकाले एक रुपैयाँ पनि बजेट नरहेको भण्डारीले स्वीकारे । उनका अनुसार बजेट, योजना तथा कुनै कार्यक्रमको टुंगो नलगाई विभाग गठन गरिएको छ । तैपनि, ऊर्जा दक्षता बढाउने कार्यक्रम बनिरहेको र आवश्यक बजेट व्यवस्थापनले जोहो गर्नेमा उनी विश्वस्त छन् ।
ऊर्जा दक्षता अभियान
गर्मी सुरु हुनासाथ विद्युत माग बढ्छ । तराईमा यसको झन चाप हुन्छ । पंखा, पानी तान्ने मोटर, फ्रिज, कुलर, एसी चलाइन्छ । यी उपकरणले अधिक मात्रामा विद्युत खपत गर्छन् । विभागले विस्तारै पुराना वा बढी विद्युत खपत गर्ने विस्थापित गर्दै आधुनिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउने योजना अघि बढाएको छ ।
गार्हस्थ उपभोक्ताले उपयोग गर्दै आएको सिएफएल बल्बको ठाउँमा लिड बल्ब उपयोग ब्यापक बनाउनुपर्ने भण्डारीले बताए । ‘तराईमा पुराना पंखा, पानी तान्ने मोटर तथा एसी वा कुलरको ठाउँमा नयाँ उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पानी तान्न वा सिँचाइ गर्न सोलार प्रयोग गरे ग्रिडको विद्युत बचत हुन्छ ।’
प्रयोग भएर बचेको सोलार विद्युत ग्रिडमा पठाउन मिल्ने हुँदा यही अनुसार कार्यक्रम पनि तयार भइरहेको उनले जानकारी दिए । विभागले विद्युत कम खपत गर्ने आधुनिक उपकरणको प्रयोग बढाउन खरिद प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ ।
उपकरण खरिद गर्न आह्वान गरेकोमा बल्ब, पंखा लगायत खरिद गर्न ४ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यस्तै, पानी तान्ने मोटरका लागि एउटा कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ ।
प्राधिकरणले पुराना विद्युतीय उपकरण विस्थापित गरी नयाँ प्रयोगमा जोड दिए पनि सजिलै कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । किनकि ग्राहकले प्रयोग गरिरहेका पंखा, पानी तान्ने मोटर, बल्बलगायत उपकरण हटाएर नयाँ किन्दैनन् । उपयोग भइरहेका सद्दे सामान हटाउन वा विस्थापित गर्न केही न केही सहुलियत हुनुपर्छ ।
सरकार वा प्राधिकरणले यससम्बन्धी छुट्टै योजना ल्याउन जरुरी रहेको भण्डारीले बताए । ‘प्रयोगमै रहेका पुराना उपकरण हटाएर नयाँ किन्न वा जडान गर्न चाहने जुसुकै व्यक्ति आकर्षित हुन सकून्,’ उनले भने, ‘यसले विद्युत बचतमा सहयोग पुर्याउँछ, ऊर्जा दक्षता योजना पनि सफल हुन सक्छ ।’
यसैगरी, बढी विद्युत खपत हुने हटाएर कम खपत गर्ने उपकरण प्रयोग गर्नेबारे जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको पनि भण्डारीको भनाइ छ । उनका अनुसार यसबारे प्राधिकरणले योजना बनाइरहेको छ । तर, बजेट अभावले योजना अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए ।
कम विद्युत खपत हुने आधुनिक उपकरण प्रयोग भए यसले प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । तराईमा सिँचाइका लागि प्रयोग हुने पुराना मोटरबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत जोगिने दाबी छ ।